Guddoomiyihii degmada Hodan oo Muqdisho lagu dilay - Awdinle Online
Guddoomiyihii Maamulka degmada Hodan Cabdi Karim Dhagajuun ayaa xalay waxaa lagu dilay Magaalada Muqdisho, kadib markii rasaas xoogan lagu furay Gaarigiisa.
Gaariga Guddoomiyaha ayaa xilliga la rasaaseeynayay waxaa uu maraayay Isgoyska loo yaqaano Jid Mareexaan, waxaana la sheegay in dalkiisa ay ka dambeeyaan Ciidamo ka tirsan Dowladda gaar ahaan kuwa Booliska ee ku sugan meel aan ka fogeen Isgoyska Jid Mareexaan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidamada Gaariga Rasaaseeyay iyo ilaalada Guddoomiyihii degmada Hodan uu dhexmaray dagaal kooban taas oo ugu dambeyn keentay in uu geeriyoodo.
Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii degmada Hodan Cabdi Karim Dhegajuun ayaa shalay Muqdisho dib ugu soo laabtay, kadib markii howlo Caafimaad loo geeyay Turkiga markii uu dhaawac kasoo gaaray qarax lala eegtay Gaarigiisa, waxaana uu shir Guddoomiyay Shirka todobaadlaha ah ee Maamulada degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in uu dib ugu soo laabtay dalka, Shaqadiisana uu bilaabay ,isla markaana Argagaxisada aysan ka niyad jebineyn Shaqadiisa, waxaana qoraalka uu u dhignaa sidatan.
Alle ayaa Mahad leh, intaa kadib waxaa maanta ku soo noqday dalka, kadib markii hawlo Caafimaad muddo kooban aan ugu maqnaa dalka Turkiga, Alle mahadii xaaladeyda Caafimaad aad ayeey u wanaagsan tahay.
Intaa kadib maanta markii aan imid, waxaan durba bilaabay shaqadii aan Bulshada u haayay, waxaana Shir Guddoomiyay, Shirka Isbuuclaha ah ee Degmooyinka Hodan & Hawlwadaag, kaasi oo looga hadlo hawlaha shaqo ee ka socda labada Degmo.
Argagixisada mar kasta waxa ay isku dayaan in Bulshada Somaliyed ay ka niyad jabiyaan Dowladnimadooda, laakiin waxaan leenahay idiinma suuragaleyso qorshahaasi aad damacsan tihiin, idinka ayaana dhibka ku dambeyn doono Insha Allah.
Waxaa naga go’an inta nafta ay nagu jirto in aan u adeegno Bulshadeena qiimaha badan.
Previous articleWariyeyaal Caawa lagu xiray Magaalada Dhuusamareeb
Next articleItoobiya oo kaxeysatay dad ay ka afduubatay Gudaha Soomaaliya